Fanamby hetsika vaovao eo imasonao. Mankalazà ny andro iraisam-pirenena ho an'ny yoga | Vaovao IPhone
Fanamby hetsika vaovao eo imasonao. Mankalazà ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga
Efa fanamby iraisana io tato anatin'ny taona vitsivitsy ho an'ny mpampiasa Apple Watch, ny fahazoana fanamby amin'ny medaly, ny sticker ary ny hafa mandritra ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga. Fanatanterahana izany fanamby izany hatramin'ny herintaona 2019 izay nanombohan'ny Apple azy voalohany.
Ny fanamby farany nomanin'i Apple dia ny an'ny Andro iraisam-pirenena momba ny dihy, fanamby iray vaovao tanteraka amin'ity taona ity izay natomboka tamin'ny 29 aprily. Amin'ity tranga ity dia tsy vaovao ny fanamby amin'ny fampihetseham-batana yoga ary efa fantatry ny mpampiasa Apple Watch tsara izany.
Mijanona ho mavitrika na inona na inona loka
Ny fomba tsara indrindra hijanonana ho salama dia ny mivavaka mba hanao fanatanjahan-tena matetika na fanaovana fanatanjahan-tena ary mihinana sakafo voalanjalanja. Amin'io lafiny io dia mazava amintsika izany miankina amin'ny mpampiasa foana ny fanapahan-kevitra Fa raha mahazo tsindry kely avy any Apple isika miaraka amina fanamby tsotra toa izao, dia mahazo bebe kokoa hatrany isika.
Amin'ity tranga ity Ny fanamby dia ny fanaovana yoga 20 minitra amin'ny 21 Jona ary ny fisoratana anarana azy amin'ny fampiharana ny hetsika Apple Watch Amin'izany no ahazoantsika ny medaly, ny sticker ary ny fatra fahasalamana izay azo antoka fa tsara ho antsika. Tsotra fotsiny ny zava-misy mihetsika ka amin'ireto tranga ireto ny zava-dehibe dia tsy ny fanatanterahana ny tanjona kendrena fa ny fanitarana an'io asa io andro maromaro kokoa, io dia fomba iray hifohana amin'ny hetsika ara-batana ary fantatr'i Apple tsara izany. Manana ny tontolo andro hamita ity fanamby ity ianao ka soraty eo amin'ny fandaharam-potoanao ary mahavoa yoga!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fanamby hetsika vaovao eo imasonao. Mankalazà ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Yoga
Efa manana tranofiara sy andro fanokafana izahay ho an'ny andian-tsarimihetsika Apple TV + "Invasion"